Xildhibaan Fiqi: Madaxweyne haka dhigan afhayeen wadaad laga kireystay fadwada iyo siyaasi fashilmay! – Kalfadhi
Xildhibaan Fiqi: Madaxweyne haka dhigan afhayeen wadaad laga kireystay fadwada iyo siyaasi fashilmay!
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa qoraal ku weeraray Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Siyaasiyiin iyo Wadaaddo dowladda in laga difaaco waxay ugu yeereen “qabyaalad wadayaal iyo argagixiso” ku boorinayey shacabka ayuu ku tilmaamay in ay ahaayeen kuwo uu Madaxweynuhu soo kireystay, sida uu hadalka u dhigay.
“Marka fatwada culimadu ay kiro noqoto, siyaasi horey u fashilmayna uu u istaago difaacidda mid kale oo wadadiisii haaya iyo qaaqle shidaal lagu soo shubo, ogaada daaha gadaashiis waxaa ku jira hogaamiye fashilmay” ayuu yiri Xildhibaan Axmed Macali Fiqi, oo dhigaal uu ku soo qoray Feysbuuggiisa aad ugu weeraray Madaxweynaha dalka.
Fiqi ayaa duray aamusnaanta lagu xanto Madaxweynaha in ay waqti dheer ku qaadato inuu ka jawaabo xaalado xasaasiya oo dalka ka taagan, waxa uuna jawaab uu dhawaan Madaxweynuhu ka bixiyey dibadbax ka dhacay Muqdisho 13-kii bishan ku tilmaamay in ay mudnaayeen kuwa dhaliyey sababta keentay dibadbaxaas, isaga oo ku tilmaamay Madaxweynaha in shacabkiisa uu ku tilmaamay qabiil iyo Shabaab, sida uu hadalka u dhigay.
“Markii Madaxweynaha dadkii uu taageeradooda taladaa ku yimid, oo ka cabanaya dhibaatoooyinka ka soo gaarey hogaan-xumidiisa, uu ku tilmaamay qabiil iyo Shabaab, uuna ugu hanjabay inuu ku qaban doono gacan-bir ah” ayuu yiri Xildhibaan Fiqi. “Fariimahaas hanjabaadaha ah waxay ku haboonaayeen in uu u diro kuwa shacabkaas dhibaatada ay ka cabanyeen u geysanaya iyo argagixisada” ayuu hadalkiisa raaciyey.
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa dhigaalkiisa ku muujiyey iney Dowladda Madaxweyne Farmaajo u xushay cid kasta oo dhaliisha ereyada ugu xun ee lagu sumcad dileyn karo, saasdaraadeedna aysan hadda harin ereyo kale oo mucaarad loo xulo, si loo sii suurad xumeeyo, sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu Madaxweynaha u soojeediyey inuu masuuliyad qaato, isaga oo muujinaya in, dadka difaaca dowladda oo uu u arko in ay dowladdu laaluushtay, uusan ka dhigan afhayeen, sida uu hadalka u dhigay.
Wasiirka Waxbarashada oo Sanatarada Aqalka Sare ugu jira Puntland u fasiray hadalkii dhawaan kasoo yeeray
Dhalinyaro Reer Hirshabeelle ah oo wakiilladooda ku dheeragelinaya in ay ku daydaan kuwa Puntland